Oh.. My Blog!: PROCEZz
ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နှင်းများသိပ်သည်းစွာ ကျနေသည်- အအေးဓါတ်သည်ကား ဆဲစ်ီးယပ် ပေါင်း မိုင်းနပ်စ် လေးဆယ် ဒီဂရီ- ရေခဲတောင်တခုဖြစ်ပါသည်- နှင်းမုန်တိုင်းကို အန်တု၍ ရွေ့လျားနေသော အရိပ်တခုမှာ အဘိုးအို တယောက် ဖြစ်သည်- တရွှီရွှီ မည်ဟည်းနေသော နှင်းမုန်တိုင်း က ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းလှသော်လည်း သူ့အတွက်မူ စည်းချက်ကျ ရွေ့ပေး နေသော ဂီတတခုအလား ထင်နေပုံရသည်- နှစ်ပေါင်းများစွာ ကထဲက အကျွှမ်းတ၀င် ဖြစ်နေဟန်တူ၏- အရောင်တောက်နေသည် ထင်ရသော ထိုသူ၏မျက်လုံးများကို သေချာကြည့်ပါက မျှော်လင့်ချက် များကိုတွေ့ရမည်- ထို့ထက်ပိုကာ မြင်နိုင်လျှင်မူ ကြေကွဲ ဆို့နင့်နေသော အရိပ်ရောင်များ ကိုတွေ့ရမည် ဖြစ်သည်- တစုံတစ်ခုကို ရှာဖွေနေသော အရိပ်ရောင်ရှိနေသည်ကမူ သိသာပါသည်- သိသာပါသည်- တခုခုကို ရှာဖွေနေသည်မှာ သိသာလှသည်- ထိုသိသာသောအရိပ် သူ့မျက်လုံးထဲ ကပ်ညိနေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်သုံးခုစာမျှပင် ကြာခဲ့ပါပြီ- လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ခန့်က ဒီနေရာ ဒီလိုရာသီမျိုးတွင် နှင်းမုန်တိုင်းအောက် ပျောက်ကွယ်သွားသော သူ၏ ချစ်သူကို ရှာဖွေနေခြင်းသည် စိတ္တဇ ဆန်လှသော်လည်း သူ၏ မျှော်လင့်ချက်တို့သည်ကား အရောင် တောက်နေဆဲ.. အခွင့်ကြုံတိုင်း ရောက်ဖြစ်သော ဤနေရာသည် ရေခဲတောင်တက်ရန် လမ်းပြလုပ်နေသော အဘိုးအိုတယောက် အတွက်မူ ပြောင်းလဲမှု အခါ ပေါင်း သုံးဆယ်မျှပင် မကတော့.. ရေခဲတောင်သည်လည်း တိမ်ဆိုင်တိမ်လိပ်တို့ နှင့်အပြိုင်ပင် ရာသီဥတုကို လိုက်ကာ ပုံသဏာန် ပြောင်းပဲ ပြောင်းနိုင်လွန်းသည်- ယခု.. မချိမဆန့် အော်မြည်းလာသော လေသည် စိတ်ထင်တိုင်း ကြမ်းတမ်းစွာ ရိုက်ခတ်လာပြန်ပြီ- ဟော. ပြိုပြန်ပြီ- အမြင့်ဆုံးရောက်နေသော နှင်းထုတို့ ပြိုကျပြန်သည်- ရေခဲစ တချို့သည် အဘိုးအို၏ ဦးခေါင်းအား လွဲရိုက် လိုက်သကဲ့သို့ ထိမှန်သောအခါ အနားယူရန် အကွက်ဆင်ပေးသည့်အလား အရာရာ ကို ခေတ္တ မေ့လျော့ခွင့် ရသွားသည်- အချိန်တခုအရောက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သည့် ပုံစံမျိုးနှင့်ပင် လန်းဆန်း လှပ နေပြန်သည်- အဘိုးအိုသည်လည်း ဘာမှမထူးခြားသည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် မေ့မြောနေရာမှ နိုးထလာသည်- ခေါင်းအား ဟိုဘက်ဒီဘက် ချိုးချ၍ အကြောလျှော့လိုက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အား လေ့လာမိသည်- သူသေသေချာချာ ရင်းနှီးခဲ့ဘူးသော အ၀တ်တစအား နှင်းခဲများဖုံးလွမ်းနေသည့် ထဲမှတစွန်းတစ အပြင်ထွက်နေသည်ကို မြင်လိုက်ရသောအခါ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် အတွင်း အတောက်ပဆုံးသော မျက်ဝန်းများဖြင့် ပြေးသွားသည်- လက်ဖြင့် နှင်းများကို ဖယ်ရှားလိုက်သည်- သူ၏ပုံစံမှာ ၀မ်းသာခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်း ပန်းတိုင်ရောက်ခြင်း ပန်းတိုင်ပျောက်ခြင်း စသည်များဖြင့် ဝေခွဲမရအောင် ရောထွေးနေတော့သည်- တွေ့ပါပြီ- သူနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှာခဲ့ရသော သူ့ချစ်သူ ဖြစ်ပါသည်- သူမသည် မျက်လုံးများမှိတ်ထားသည်- နုတ်ခမ်းများက ခပ်စိစိရှိကာ ပါးတို့သည် တဘက်တချက်၌ တလိုင်းဆီ ကိုင်းညွတ်နေသည်မှာ တောင့်တောင့်တင်းတင်းရှိလှသော်လည်း သူ့ကို ရီပြနေသည့်အလားပင်- အဘိုးအိုသည် မျက်လုံးမှ မျက်ရည်များ လျှံတက်လာသည်အထိ ပွေ့ဖက်ကာ ကြည့်နေလျက်- ထို့နောက် သူ၏လက်များသည် ယောင်ရမ်းကာ သူ၏ပါးပြင်အား ပွတ်ကြည့်မိသည်- အရေအတွန့်ပေါင်းများစွာကို စမ်းမိသည့်အခါ မျက်လုံးများသည် အရောင်ပြောင်းသွားသည်- လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်လောက်ကတည်းက သေဆုံးသွားပြီဖြစ်သော သူ၏ချစ်သူမှာ ပုံသဏ္ဌန် မပြောင်းသေး သော်လည်း သူသည်ကား နေ၀င်ချိန်ရောက်နေသော လူသားတယောက်ကဲ့သို့ ပုံစံပြောင်းသွားပေပြီ-
တောအုပ်ကြီးထဲမှ လှိုင်းထနေသော တောင်တန်းများသည် ပြာလဲ့လဲ့ ကောင်းကင်ကြီးနှင့် လှပနေသည်- လေနုအေးလေးများသည် တငြိမ့်ငြိမ့်တိုက်ခတ်လျက်- သစ်ပင်များသည် တပင်နှင့်တပင် ရိုက်ခတ်ဆော့ကစား နေကြသည့်အလား ယိမ်းယိမ်းနွဲ့နွဲ့- ထိုလှပသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထပ်မံအရောင်ချယ်ထားသည်မှာ ကြည်စိမ်းနေသော ရေကန်ကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်- ထိုရေကန်ကြီးဘေးနားတွင် သမင်တကောင်သည် ပြေးလွှားဆော့ကစားလိုက် နားလိုက် အစာစားလိုက်နှင့် အပူပင်ကင်းနေသည်မှာ ကျားတကောင် ချုံဖုတ်ထဲမှ ချောင်းနေသည်ကို သတိမမူမိအောင်ပင်- သမင်တကောင်သည် ကျားတကောင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ခွန်အား မည့်သည့်အခါကမှ မရှိခဲ့ပါ- တခဏအတွင်းမှာပင် စိမ်းလဲ့လဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အနီရောင် သွေးများဖြင့် အကျည်းတန်သွားသည်- ကျားများ ၀ံပုလွေများ သည် တကောင်နှင့်တကောင် မာန်ဖီရင်း အသားတစ်များကို မြိန်ရေယှက်ရေ စားနေတော့သည်-
ခြံဝင်းတခုမှ ဆူညံစွာ အော်ဟစ်ညည်းညူသံကို ကြားရသည်-
သူသည် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဒီခြံထဲတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်- သူတို့ကျွှေးသော အဆာများကို စားသုံးသည်- ပျင်းလာလျှင် အိပ်သည်- အစာထစားသည်- ဒီလိုပဲ ကြီးပျင်းလာခဲ့ရသည်- သူသည် ၀က်တကောင်ဖြစ်ပါသည်- ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ကြီးပြင်းခဲ့ရသော ၀က်တကောင်သာဖြစ်ပါသည်- ယခုမူ လာခေါ်နေကြပြီ- ထိုသူတို့ ဘာလို့လာခေါ်သလဲ ဆိုသည့်အကြောင်း တစွန်းတစရိပ်မိပါသည်- ထိုသူတို့နှင့် ခွန်အားခြင်းယှဉ်ပြိုင်ရန် အစွမ်းအစ သူ့မှာမရှိခဲ့ပါ- ဒုတ်ကြီးကြီး တခု သူ၏နှာခေါင်းဝ သို့ အရှိန်နှင့် ပြေးလာသည်ကို သာနောက်ဆုံး မြင်လိုက်ရသည်- ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သွေးများဖြင့် ရဲရဲနီနေတော့သည်- ည.. လူတို့သည် ညစာစားပွဲ တစ်ခုကို ခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပနေသည်- ထိုနေ့ကအသတ်ခံရသော ၀က်၏ သွေးရဲရဲ အသားတစ်များကို ပိုးစိုးပက်စက် မစားကြပါ- မီးကင်၍ ယဉ်ကျေးစွာ စားကြပါသည်-
မေခ.. အလွန်လှပါသည်- သူမသည် နီစွေးသော နုတ်ခမ်းများ.. စိမ်းဖန့်ဖန့်ရှိသော သွေးကြောကလေးများ- ကော့ညွတ်သွယ်သော မျက်တောင်များ. ကြည်လင်၍ ပြာလဲ့လဲ့ရှိ သော မျက်ဝန်းများ ပိတုန်းရောင်ထနေသော ဆံနွယ် ထူထူအုပ်အုပ်ရှည်ရှည်များ အချိုးအဆ ပြေပြစ်လွန်းသော ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံ ၀င်းပသော အသားအရေများ ပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့် မြင်ရသူအပေါ် မှင်တက်သွားစေနိုင်သည် အထိ လှရက်သည်-
ယခုလည်းခန့်ခန့်ညားညားပင် စင်အထက်တွင်လဲလျောင်းနေသေးသည်- ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူအများသည် ၀မ်းနည်းမှု ကိုအသက်သွင်းကာ ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေကြသည်- သေဆုံးသွားပြီဖြစ်သော မေခအတွက် သံစဉ်တခုကို ရွတ်ပေးနေကြသည်- ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီး၏ စင်ပေါ်မှာကား မေခသည် လှပစွာ လဲလျောင်းနေပြီ- ပန်းပေါင်းစုံတို့ဖြင့် ပြည့်နက်နေသော ထိုစင်မြင့်တ၀ိုက်တွင်ကား မွှေးပျံကြိ်ုင်ကာနေသည်- မေခသည် အလှပကို အနိုင်ယူသွားတော့မည် ဆိုကာ နာခြင်းနှင့်အိုခြင်း မရောက်ခင်မှာပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားသည်- သို့သော် မြို့စားကြီးသည် မိုက်မဲလှသော သူမအတွက် စီရင်ချက် တခုချလိုက်မှာ အလှအပကို နောက်ဆုံးထိ သယ်ယူသွား နိုင်ရန် အလှပဆုံးစင်မြင့် အမွှေးပျံ့ဆုံးသော ပန်းရနံ့များ ဖြင့် မေခအား မီးမရှို့ပဲ ထိုစင်ထဲမှာပင် ထားခဲ့ရန်ဟု ဖြစ်သည်-ပျားတကောင်သည် ပန်းရနံ့ကြောင့် မေခ၏ ရင်ဘတ်ထက်မှာပင် အနားယူနေသေးသည်-
နှစ်ရက်- ၀င်းပသော အသားအရေမှာ ညိုငန်းငန်းဖြစ်လာပြီ-
သုံးရက်- ပန်းတို့သည် အမွှေးနံ့ကို ထိမ်းထားစေရန် မတတ်နိုင်၍ လက်လျှော့လိုက်ပြီ- ပျား ပုတုန်းတို့က ထိုနေရာမှ ဝေးရာသို့-
လေးရက်- ပွရောင်းရောင်း ဖြစ်လာသည်မှာ မေခမှ ဟုတ်ပါလေစ-
ငါးရက်- အနိထာရုံ မြင်ကွင်းတခု ဖြစ်လာသည်-
ခြောက်ရက်- လဒတကောင်၏ မျော်လင့်ချက် ပါသောအသံတခုကြားနေရသည်-
ခုနှစ်ရက်- ပုတ်အဲ့သော အနံ့များသည် ပတ်ဝန်းကျင်လေထုတခုလုံးကို နေရာယူထားသည်- အရည်တစက်စက် ကျနေသော မေခ၏ ခန္ဓာကိုယ် ထဲသို့ ရေတစက် ထပ်ကျသွားသည်- လဒတကောင်၏ သရေတစဖြစ်သည်-
ကျွှန်းတခုပေါ်၌ လူလေးဦးပိတ်မိလျက်ရှိသည်- မည်သည့်အချိန်ကတည်းက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မည်ကဲ့သို့ရောက်လာကြမှန်း မည်သူမျှ မသိကြ- ထိုကျွှန်းပေါ်တွင်က သားရဲတိရိစ္ဆာန်များ ကျက်စားသည်- ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းဝါဒ ထွန်းကားသည်- တယောက်သည်က ပျော်ပျော်နေ၏- သားရဲ တကောင်ကောင် နှင့်တွေ့လျှင် ရင်ဆိုင်၏- ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ယူ၏- သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဝယ် ကုတ်ဖဲ့ခံဒါဏ်ရာများနှင့် ပြည့်နှက်နေတတ်၏-
တနေ့နေ့ တွင် သူ့အားအနိုင်ယူသွားမည့် သားရဲတကောင်ကောင်နှင့်တွေရမည်ကို မူ မေ့ပြစ်ထားခဲ့သည်- တယောက်မှာကား ပိတ်မိနေပြီဟု သိသည်- ထိုအသိကြောင့် ဘာမှမလုပ်ပဲ အကြီးအကျယ် စိတ်မချမ်းမြေ့လျက် ရှိကာ တမှိုင်မှိုင်နှင့် သေဆုံးသွားသည်- ကျန်နှစ်ယောက်မှာကား ခပ်ရေးရေးမြင်ရသော ကျွှန်းတခုဆီသို့ သာလှမ်းမျှော်ကြည့်နေတတ်သည်- ထိုကျွှန်းပေါ်ရောက်လျှင် လွတ်မြောက်မှုတခုခု တွေ့နိုင်သည်ဟူသော ရည်မှန်းချက်ရှိသည်- ထိုနှစ်ယောက်ထဲမှ တယောက်သည်က သက်လုံကောင်းအောင် ကြိုးစားလျက် တနေ့သောအခါ ရဲဝံ့စွာ ရေကူး၍ ထွက်သွားတော့သည်- အရင်ကတည်းက ရေကူးကျွှမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်ထားသူဖြစ်ရမည်- ကျန်တယောက်မှာကား ရေမကူးတတ်သောကြောင့် ပျော်ပျော်နေသောသူ တယောက်နှင့်ပင် အတူတူ သားရဲတိရိစ္ဆာန် တို့၏ရန်ကိုခုခံရင်း နေ၏- အချိန်ရလျှင်မူ ပင်ပင်ပန်းပန်းနှင့် သတိထား သွားရသော တောအုပ်ထဲသို့ဝင်ကာ ၀ါးများစု ဆောင်းလျက်ရှိသည်- ဖောင်တခုဖွဲ့နိုင်ရန်ဖြစ်သည်- ထိုအချိန်မှာပင် ထိုကျွှန်းပေါ်သို့ အမည်မသိ လူတစု ထပ်ရောက်လာပြန်သည်- လူများလာတော့ ပျော်ကြသည်- သားရဲတိရိစ္ဆာန်များသည်လည်း တနေ့ထက်တနေ့ တိုးပွားလျက်ရှိသည်-
အအေးဓါတ်သည် ရုပ်ဝတ္တု များကို ခေတ္တမျှရပ်ထားစေနိုင်ရန် အစွမ်းထက်၏- အပူဓါတ်သည် ယဉ်ကျေးမှုဝတ်ရုံ ကို လှပစေရန်အထောက်အပံ့ပေး၏- သို့သော် အချိန်သည် အားလုံးကို ၀ါးမျို၏- အချိန်ကို ပြန်လှည်ဝါးမျိုးနိုင်ရန် စွမ်းအားတခုရှိပါလိမ့်မည်- လွယ်လွယ်နှင့်မရနိုင်ပါ- ထိုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကား ငှက်ဆိုးများ၏ ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူသံကို ကြားနိုင်သည်- လဒငှက်များ၏ သရေစ တို့သည် မိုးအဖြစ်ရွာချလျက် ရှိသည်-
Carly don't be sad
Life is mad
Take it, take it in your hands.
Remarks: ; Snapshots are from the movie of " The Legend Of Zu "
Posted by Tesla at 2:36 AM
UK News Portal
All Post Of Oh.. My Blog!
‘R ‘A ‘I ‘N ‘ ‘ ‘
D I A R Y ?
Other Myanmar Blogs
Online -------> hits